OLEE OTú IJI TỌGHARỊA IPHONE SITE NA ITUNES - ITUNES - 2019
Ọ bụrụ na ị maara otu esi jikọọ na kọmputa ọzọ site na TeamViewer, ị nwere ike inyere ndị ọrụ ndị ọzọ aka idozi nsogbu na kọmputa ahụ, ọ bụghị naanị nke ahụ.
Jikọọ na kọmputa ọzọ
Ugbu a, ka anyị nyochaa nzọụkwụ site nzọụkwụ otu esi eme nke a:
Mgbe ịmalitere ya, ọ dị mkpa ka ị ṅaa ntị na mpaghara ahụ. "Kwe ka Management". N'ebe ahụ ị ga-ahụ ID na paswọọdụ. Ya mere, onye ya na ya na-alụ kwesịrị inye anyị otu data ahụ ka anyị wee jikọọ na ya.
Mgbe ị natachara data dị otú ahụ, gaa na ngalaba ahụ "Jikwa kọmputa". N'ebe ahụ ka ha ga-abanye.
Nke mbụ, ị ga-ezipụta ID nke onye ibe gị nyere ma kpebie ihe ị ga-eme - jikọọ na kọmpụta maka nchịkwa anya ma ọ bụ ịkekọrịta faịlụ.
Ọzọ ị ga-eji pịa "Jikọọ na onye òtù ọlụlụ".
Mgbe a ga-arịọ anyị ka anyị dee paswọọdụ na, n'eziokwu, njikọ ahụ ga-eguzobe.
Mgbe ịmalitegharịrị ihe omume ahụ, a gbanwere paswọọdụ maka nchekwa. Ị nwere ike ịtọ ntọala na-adịgide adịgide ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ na kọmputa na-adịgide adịgide.
Gụkwuo: Otu esi edebe paswọọdụ na TeamViewer
Ị mụtara otu esi jikọọ na kọmputa ndị ọzọ site na TeamViewer. Ugbu a ị nwere ike inyere ndị ọzọ aka ma ọ bụ chịkwaa PC gị.